Alaab-qeybiyeyaasha Apple waxay u dhaqaaqaan AirPods | Waxaan ka socdaa mac
Iibiyeyaasha Apple waxay u guuraan AirPods
Xanta ku saabsan AirPods waa joogto bilooyinkan markan waxay umuuqataa in alaab-qeybiyeyaashu ay bilaabayaan shixnadaha qaar qaybaha gudaha sida looxyada wareegga yar ka mid ah kuwan cusub ee Apple AirPods.
Alaab-qeybiyeyaasha sida: Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding iyo AT&S waxay ka muuqdaan liisaska la filayo inay tilmaamayaan inay bilaabeen shixnadaha qaar gudaha ah oo loogu talagalay alaabada soo socota ee Apple, oo ay ka mid yihiin sida muuqata AirPods.
Warbixino kala duwan ayaa tilmaamaya in soo saarida aaladahaan cusub ee Apple ay dhowdahay macquulna tahay in shirkada Cupertino ay diyaarisay ama ay diyaarineyso dhamaan alaab-qeybiyeyaasha si ay u bilaabaan soo saarida aaladooda sida ugu dhaqsiyaha badan. Xusuusnow taas gabaabsi iyo hawlwadeenada qaar oo ay weheliyaan macnaha faafa taas oo aan kujirno waxay dib udhigi kartaa shixnadaha alaabada qaar waana sababta ugu dhaqsiyaha badan ee aad ubilaabto.
Si fudud jiilka saddexaad ee Apple AirPods kuma dari doono waxqabadyo badan sida AirPods Pro, waxaa la dhahaa tusaale ahaan kuma dari doono joojinta buuqa firfircoon tanina waa wax iska caadi ah sameecadaha dhagaha la galiyo ee aan loo maleyneynin in qiimahoodu aad u sarreeyo. Intaa waxaa dheer, waa in lagu xisaabtamo in naqshadda jiilka seddexaad ee AirPods ay la mid noqon doonto tan hadda jirta ee AirPods Pro laakiin haddii silsiladda ku jirta qaybta ugu dambeysa sidaas darteed ay "dhegta" u dhigi doonaan dhegta wax ka yar ayna ku dari doonaan baajinta dhawaaqa runtii waxay umuuqataa mid aan shaqeynaynin.
Waan la socon doonnaa dhammaan wararka xanta ah ee ka muuqda jiilkaan cusub ee AirPods waana idinla wadaagi doonnaa adiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Iibiyeyaasha Apple waxay u guuraan AirPods
Apple TV + wuxuu helay ku dhowaad 400 magacaabid abaalmarin tan iyo markii la bilaabay
AirTags waxaa loo cusbooneysiiyay nooc cusub oo firmware ah 1.0.276